घर युरोपियन स्टार रबर्ट लुवेन्डोकी बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
एलबी पूर्ण फुटबल प्रतिभा को प्रस्तुत गर्दछ जसले सर्वोत्तम उपनाम द्वारा जान्छ; 'लुय'। हाम्रो रबर्ट लुवेन्डोस्की बालबालिकाको कथा प्लस अनबल्ड जीवनी तथ्य तपाईले आफ्नो बचपनको समय सम्मको उल्लेखनीय घटनाहरु पुरा खातामा ल्याउनुहुन्छ। विश्लेषणमा प्रसिद्धि, पारिवारिक जीवन र उहाँका बारेमा धेरै साना ज्ञात तथ्यहरू अघि आफ्नो जीवन कथा समावेश गर्दछ।
हो, सबैले आफ्नो लक्ष्य क्षमता को बारे मा जान्दछ तर केवल केहि प्रशंसकहरु रबर्ट लुवेंडोस्की जीवनी कथा मा एकदम दिलचस्प छ। अब थप adieu को बिना, चल्न सुरु गरौं।
रबर्ट लुवेन्डोकी बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य:बाल्यकाल
रबर्ट लुवेन्डोकी अगस्त मा 21, वारसा मा 1988 मा जन्म भएको थियो पोल्याण्डको राजधानी Krzysztof Lewandowski (पिता) र आयोवा लुईदेवस्का (आमा) द्वारा।
उनी कैथोलिक अभ्यास गर्ने परिवारमा जन्मेका थिए र उनको पोषण जीवनको पहिलो वर्ष पश्चिमी पोल्याण्डको नजिकैको लेस्जोनोमा बिताए।
रबर्ट लुवेन्डोकी बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य:खेलकुद हुन तयार भयो
बियोग्राफियाले यसलाई राख्दछ, लुय को जन्म दिन धेरै दिन देखि खेलाडी बनेको थियो। केवल मनपर्छ लेरोया सेन, त्यो खेलमा जन्मिएको थियो। आदर्श रूप मा, रबर्ट लुवेन्डोस्की परिवार को सबै सदस्य खेलकूद स्टार हो। उनको आमा, इवानो पहिलो लेग अकादमिक स्पोर्ट्स एसोसिएशन 'वारसा' मा एक सक्रिय वॉलीबल खेलाडी थिए, जबकि उनको पिता, क्रजस्टोटो - एक पूर्व जस्टिस्ट - हटननिक वारसा फुटबल क्लब मा एक सफल खेलाडी थिए। कुनै आश्चर्य छैन कि यी पक्षहरूमा यस्ता स्पष्ट उदाहरणहरूको साथमा, युवा रबर्टले उनको आमाबाबुले पहिले नै पछाडि पछाडिको ट्रेलललाई पछ्याए। उनले विभिन्न स्पोर्ट्सको प्रयास गरेका थिए, तर बिना कुनै संदेह थियो कि उनको खुट्टामा बल संग राम्रो लाग्यो र बच्चाको रूपमा सफलताको रेकर्ड थियो।
रबर्ट लुवेन्डोकी बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य:फुटबलमा सुरू गर्नुहोस्
तिनको बुबा, आफ्नो छोराको जुनसुकै अनुभव गर्थे, आफ्नो सानो केटा पार्टी पार्टी लेस्जेन ट्रेनिंग सत्रमा प्रयोग गर्न थालिन्। नौ वर्षको उमेरमा उनले आफ्नो प्रशिक्षण बोरोसोभिया वारसामा सुरु गरे।
हार्ड टिर्मक, रेत बिना घाँटीको चट्टान, धूल सीमित दृश्यताका बादलहरू, कोठाहरू बदल्नको सट्टा अनियन्त्रित सञ्झ्यालहरूसँग अनियमित पुरानो बाधाहरू - यी नियमहरू थिए जसमा रबर्ट लुवेन्डोस्कीको उत्कृष्ट प्रतिभा बढ्न थाले।
सात वर्षपछि लुवेन्डोस्कीले वारसोभियालाई डेल्टा वारसाको पाँचौं स्तरीय क्लबमा सामेल गर्न छोडेका थिए, जसले लिनिया वारसाका खेलाडीहरूको सिधा सप्लायर थियो। उहाँ दुर्भाग्यवश भयो जबसम्म त्यहाँ प्रगति भयो।
रबर्ट लुवेन्डोकी बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य:यस त्रासदी
उनको पिता क्रेजस्टोट्फले त्यो सपना देख्यो कि एक दिन उसले उसको छोरा लाजियकोकोका स्ट्रीटबाट क्लबको लागि खेलिरहेको देखे। दुर्भाग्यवश, भाग्यको क्रूर मोड़को कारण, उनले आफ्नो छोराको पहिलो वरिष्ठ खेल हेर्न पनि सकेनन् - उसले 2005 मा पारित गर्यो।
पारिवारिक त्रासदीले रबर्टलाई धेरै चाँडै मर्यो। Henrikh Mkhitaryan उनको नायक (बुबा) को मृत्यु पछि एक नै भाग्य पनि देखा पर्यो।
रबर्ट लुवेन्डोकी बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य:बोल्ड चरणहरू लिँदै
आफ्नो अझै पनि धेरै जवान उमेरको बावजूद, आफ्नो आमाको वित्तीय बोझ कम गर्न चाहन्थे, तिनले आफ्नो परिवारको घर छोड्न र वारसामा आफ्नो बहिनीको साथ गए। उनले डेल्टा फुटबल क्लबमा कमाईका केहि पैसा कमाए।
केही सभ्य खेलहरू र चार स्कोरमा गोल गरेपछि उनले लिगिया वारसा स्काउट्सले देखाएका थिए।
रबर्ट लुवेन्डोकी बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य:पतन उठाउँदै
2005 / 2006 लुवेन्डोकीको सिजनमा एक वर्ष सम्झौतामा कुख्यात पोल च्याम्पियनको चौथो स्तरीय भण्डारको लागि एक वैध खेलाडी थियो।
उनको लक्ष्य चाँडै सकेसम्म प्राथमिक टोलीमा प्रवेश गर्न थालेको थियो। उहाँले रिजर्व खेलाडीको रूपमा राम्रो प्रभाव पारेको छ, जसले आफ्नो कोच र फुटबल पन्डितहरूको ध्यानबाट बचाउन सकेन।
युवा स्ट्राइकरले व्रोनकीमा प्रशिक्षण शिविरमा सहभागी भएकी थिइन्। पहिलो टोली संग उनको लायक साबित गर्न।
दुर्भाग्यवश, त्यहाँ गल्ती थियो। युवा लुईले पतन गरे। उनले क्लबको साथ आफ्नो कैरियरमा धेरै चाँडै एक भयानक चोटको सामना गरे र उनको पूर्ण क्षमता प्रदर्शन गर्न असमर्थ थियो।
Bakayoko आफ्नो युवा क्यारियरको समान समयमा यस्तो भाग्यको सामना गर्यो। लुईका लागि, त्यहाँ उनको पोलिश शीर्ष लीग - एक्स्ट्राक्लासामा सामेल गर्न गइनन्। अन्य निचला क्लबहरूमा भाग लिनको ब्याकअप योजना विफल भयो। कसैले उहाँलाई चाहँदैनन्। लिगिया, बरु अप्रत्याशित रूपमा र कुनै फौजदारी वा व्याख्याको साथ, रबर्टको सम्झौता विस्तार गर्न निर्णय गरेनन्।
हेर, छोटो-जीवित क्यारियर बिस्तारै आउँथ्यो। यो रोबर्ट लुवेन्डोकोकीको अनौठो सपना थियो।
रबर्ट लुवेन्डोकी बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य:महान् बहाली
लिनिया द्वारा अस्वीकृत भएको, रबर्ट छोडिएको थियो। उहाँसँग कुनै क्लब थिएन र उनको उचित प्रशिक्षण आधारमा पहुँच थिएन। सौभाग्यवश, भर्खरै नै, उनको आमा आफ्नो बचावमा आउन थालेका थिए सबै छोराछोरीको सपनाहरु सत्य बनाउन को लागी सबै सम्भव प्रयासहरू।
गर्मीमा 2006 मा, जवान लेवी आफ्नो चोटबाट बरामद गर्यो। ज्यूनिक्ज़ प्रोस्स्लोवद्वारा उनीहरूलाई भाग्यमानी खुसी हुनुहुन्थ्यो जुन रिपोर्टहरूको बावजूद खतरामा परेको थियो भने उनीहरूले अझै चोट लागेको चोट लागेको थियो।
त्यहाँ, लेवीले फुटबल टपहरूको दिशामा गतिशील चढाई सुरु गर्यो। उनले पोलिस तेस्रो लेग जित्नको लागि उनको टोलीलाई पन्द्रह गोल गरेपछि उनलाई लेगको उच्च स्कोरकर्ता बनेको थियो। लुईको टोलीले उनीहरूको प्रयासमा पोलिसको शीर्ष लीग फ्लाइटमा पदोन्नति प्राप्त गर्यो। उनले चाँडै 20 लक्ष्यहरू प्रति सीजनमा स्कोर गर्न थाले।
उहाँले क्षमाको लागि माग गर्नुभए पछि उनी आफ्नो पुरानो क्लब लेगुनिया पुन: मिलान गर्न मौका लिएका थिए।
फेरि, प्रस्तावित ढेर हेर्ने र वार्ता समाप्त नगर्ने भएपछि लुवेन्डोकीले बोरुसिया डर्टमन्डलाई खेल्ने निर्णय गरे, जसको साथ उनले एक चार वर्ष सम्झौता गरे।
रबर्ट लुवेन्डोकी बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य:ग्लोबल फेममा बढ्दै
2011 / 2012 को सिजनले उत्कृष्ट सफलताको क्षण साबित गर्यो। र एक सफलता छ कि एक प्रतिष्ठित क्यारियर को सपना जो धेरै फुटबलर अनुभव गर्न चाहान्छ। सुरुमा त्यहाँ कुनै संकेतहरू थिएनन् कि संकेत गर्दछ कि लेगन्डोकीको सिग्नल आइडुना पार्कमा क्यारियर परिवर्तन हुने थियो। अवस्था कोप अमेरिका र लुकास बारियसको चोटको साथमा चोट लागेको थियो जर्गन क्लप्प रिकेन्सी भर्न को लागी लुवेन्डोस्की लाई उठायो।
ध्रुवले त्यो मौकाको रूपमा सबै भन्दा राम्रो मौका पायो। उ सँग, डर्टमन्ड एक अविश्वसनीय परिवर्तनको साक्षी एक पूर्ण-समयको जोकर अचानक एक हत्याराको इज्जत संग पहिलो-कक्षा स्ट्राइकरमा परिणत भयो। यो रबर्ट लुवेन्डोकीको उदयको प्रसिद्धिको कथा हो जुन उनको यात्राको लागी बताइएको छ एफसी बायर्न.
बाँकी रहेका उनीहरूको इतिहास इतिहास हो। लुईका शब्दहरूमा; "म फुटबललाई माया गर्छु, म मात्र प्रेम गर्दछु किनभने यसले मलाई मेरो जीवन दिन्छ। त्यहाँ अरू छैन। "
रबर्ट लुवेन्डोकी बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य:पारिवारिक जीवन
रबर्ट लुवेन्डोकीकी परिवार फुटबल, भ्लीबल, मार्शल आर्ट र योडो तारा बनेको छ। अब परिवारको ढिलाइबाट सुरू गर्न दिन्छ।
फेथर: लुई उनी जीवित हुँदा आफ्नो बुबाको नजिकको घनिष्ठ वर्षका साथ मजा लिइन्। उनलाई फुटबलमा आवश्यक एन्टिङ्गहरू सिकाउने, क्रजस्टोफ ले लुयसँग स्थानीय हात खेल खेल्न पनि समय पाउँदछ।
युवा रबर्ट लुवेन्डोस्की र बुबा-क्रजस्जोट्ट
लुईकी बहिनी, मिलिना लुवेन्डोकिकी सहित सबैको आँखामा विशेष थियो। तिनीहरू दुबैलाई आफ्नो हातमा झूट झल्काउन र आफ्नो मनपर्ने बच्चाहरु टिभि कार्यक्रम हेर्छन्। यो धेरै दुर्भाग्यवश तिनीहरूले बच्चाको रूपमा उसलाई हराए।
रबर्ट लुवेन्डोकीसँग बुबा-क्रजस्जोट्ट र बहिनी मिलिना
मातृभाषा: आयोवा लुईदेवस्का छ रोबर्ट लुवेन्डोकीकी आमा। दुबै पक्षहरू सँगै एक राम्रो सम्बन्ध साझा गर्दछ।
रोबर्ट लेभ्डोन्डिकीले मम- आयोवा संग एक शट लिदै
त्यो व्यक्ति हुन जान्दछ जुन रोबर्टलाई म्यानम्यानलाई धेरै चाँडै बलियो बनाउँछ र उनको पतिको मृत्यु पछि शोरले लिन्छ। कुनै पनि संदेह छैन, रबर्टले आफ्नो बिरामीको आधारमा बिस्तारै बिस्तारै पितालाई श्रेय दिन्छ। उहाँले आफ्नो आमालाई सबै राम्रो र खराब समयहरूसँग खडा गर्न (उनको पिता र प्रारम्भिक क्यारियरको चोट गुमाउनुको लागि) को श्रेय दिनुहुन्छ।
उनको पतिको मृत्युमा पुन: प्राप्ति, एकपटक आयोवाले भने; "सौभाग्य देखि, यस समय यो भयो, रबर्ट घर थिएन। क्रजस्टोट्फले क्यान्सरको साथ संघर्ष गरे, र एक रात उसले अर्को स्ट्रोक पायो र अर्को बिहान हाम्रो बीचमा थिएन। त्यसपछि रोबर्ट बेरिनीमा आफ्नो पुरानो बहिनी संग बस्दै थिए। मैले कक्षा पछि सबै कुरा भने। उहाँले जवाफ दिनुभयो कि उहाँले यो संवेदनशील। त्यो सानो बखत धेरै बहादुर थियोआईडी।" भन्छन् श्रीमती आइवाना।
एक परिवारको रूपमा समेत, लेवी अझै पनि आफ्नो माम आइवाओसँग खर्च गर्न गुणस्तर पाउँछन्। उहाँले आफ्नो बुबा छोडिदिनु पछि उनलाई कहिल्यै अकेला महसुस गर्न सफल बनाइदिन्छ।
रोबर्ट लुवेन्डोकीकी आमा- इवानो
सिस्टर: मिलिना लुवेन्डोकी रबर्ट लुवेन्डोकीकी बहिनी हो। उनी त्यहाँ लुईको लागि थिए जब उनी कडा समय दौडिए र दुवै जना बच्चाहरू थिए। तिनी एक पेशेवर भ्लिबल खेलाडी हुन् जसले आफ्नो देशलाई वर्षको लागि प्रतिनिधित्व गरेको छ। उनी फुटबलमा उनको भाइ उत्तेजित हुँदा वोल्लिबलमा उत्तीर्ण हुन्छन्।
मिल्ना उनको आमा, ओवोना जो एक पूर्व पेशेवर भलिबल खेलाडी थियो पछि पछि लागे।
रबर्ट लुवेन्डोकोकी बहिनी मिलना
ग्रैंडमोथ: लुईको दादी 91 वर्षको उमेरमा मरे। तल उनको र मिल्ना लुवेन्डोकी छ।
रबर्ट लुवेन्डोकीकी दादी
रबर्ट लुवेन्डोकी बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य:सम्बन्ध जीवन
रबर्ट लुवेन्डोकीकी पत्नी अन्ना लुवेन्डोस्को हो। त्यो पोलिश एथलीट हो, वारसा मा शारीरिक शिक्षा अकादमी स्नातक। तिनी पोषणमा विशेषज्ञ, कराटे र अन्तमा, परम्परागत कराटेमा पोल्याण्डको एक प्रतिनिधिको रूपमा लिखित रूपमा विशेषज्ञ हुन्। दुवैको 2013 मा उनको विवाह थियो जो उनको सफलता वर्ष थियो।
रोबर्ट लुवेन्डोकीको जीवनको प्रेम
लुईको प्रेम अन्नाको लागि स्वीकृत छ र यसको धेरै प्रशंसकहरू र फुटबलर्सहरू पनि (मनपराउने) द्वारा अनुकरणको योग्य छ मार्कस राशफोर्ड, रोबर्टो फर्मिनो र जुआन मटा जसले धेरै सभ्य सम्बन्धहरू चिनिन्छ)। दुबै लुई र अन्ना सधैं सँगै सँगै फसेका छन्।
रोबर्ट लुवेन्डोस्क र पत्नी अन्ना राम्रो समय छ
यो नोट उल्लेखनीय छ कि रबर्ट लेभोन्डोकीकी पत्नी अन्ना लुवेन्डोकीले 2009 वर्ल्ड च्याम्पियनशिपमा कराटे श्रेणीमा कांस्य पदक छ।
रबर्ट लुवेन्डोकी पत्नी, अन्ना- एक कालो बेल्ट धारक
डिसेम्बरको 7th मा रबर्ट लुवेन्डोकी, 2016 ले घोषणा गरे कि उनको श्रीमती गर्भवती भएको थियो 'गर्भवती पेट' लक्ष्य उत्सव।
पोलिश फर्वार्डले पछि लागे 'wonderful' उनको दिल र उनको नवजात पुत्री क्लोरा को पोस्ट गरे पछि।
रबर्ट लुवेन्डोकी बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य:हिटलरसँग सम्बन्धित
तिमीलाई थाहा छ ?? !! ... रोबर्ट लुवेन्डोकी हटलरको सबैभन्दा सानो बहिनीको पोप थियो जसलाई प्वला हिटलर भनिन्थ्यो। त्यो वर्ष 1960 मा मृत्यु भयो।
हिटलरसँग सम्बन्ध रबर्ट लुवेन्डोस्की
रबर्ट लुवेन्डोकी बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य:साइकल म्यान
रोबर्ट लुवेन्डोकी एक पूर्ण बाइक र मोटरसाइकल उत्साही हो! एक पेशेवर फुटबल क्यारियर हुन को लागी, लेवाले आफ्नो मोटरसाइकल जुनून गुमाएका छैनन् र पछिल्लो 10 वर्षमा विभिन्न दुर्घटनाहरु बचाउनुभएको छ।
दुर्घटना हुँदा तीन महिनापछि उनी आफ्नो साइकल चलाएर दुर्घटना हुँदा थिए। उहाँ अहिले धेरै सावधान हुनुहुन्छ। यो हामी कहाँ छ रबर्ट लुवेन्डोकीको लाइफ स्टोरीको लागि।
पोलिश फुटबल डायरी